Sary Fitrandrahana solika ao Tsimiroro, andrefan'ny Madagasikara
Ny ao Tsimororo no efa nisy ny fitrandrahana, izay misy 2 milliards de barils no tahiry ao. Vao 160 000 barils hatreto no efa tafavoaka avy ao ambanin'ny tany, dia niato ny famokarana, satria ny fampanantenana ny ampiasana io solika mavesatra io ho an'ny Jirama dia tsy tody arak'izay nifanarahana.
Ny tetikasa "Vitatsika io" izany dia ny hanangana orinasa Malagasy lehibe mpitrandraka solika sy Gaz. Hapetraka ihany koa ny orinasa vaventy Malagasy fanadiovana solika, na raffinerie.
Tsara ny manamarika fa somary kely noho ireny barika menaka ireny ny barika pétrole, 159 litres ny barika pétrole iray, ary 65,34 $ ny Baril androany 20 jona 2018. Na 0,41$ / litre ka raha 1 $=3 346,89 ariary androany, dia 1 375,38 ariary (6 876,91 fmg) ny litatry ny pétrole eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nefa dia amidy eny amin'ny station efa ho 4 050 ariary (20 250fmg) ny litatry ny lasantsy, in-telo avo heny amin'ny vidiny ividianana azy.
Hapetraka ao Morondava Menabe izany Raffinerie izany, sady ho ampiasaina ny charbon de terre ao Sakoa, sy ny Gaz amin'iny faritra atsimo andrefana iny, toy ny ao Sakaraha.
Hisy nouvelle ville izany hapetraka amin'iny faritra ilany andrefana iny handray ireo mponina hiasa amin'izany. Any amin'ny 500 000 logements no ao Narinda Antsohihy, ary 200 000 logements aty Menabe.
Hisy aéroport international lehibe ifamezivezen'ireo mpandraharaha mitrandraka rehetra, na ny ampiasa ny port lehibe ao amin'ny helidranon'ny Narinda izay mirefy 80Km ny halavany ary 10Km ny sakany. Hisy zone de stockage lehibe afakaba na offshore.
Hisy fantsona vaventy na pipeline hitondra ireo solika hifamezivezy ho an'ny Faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, izay hihazo ny Port de Narinda, Port lehibe indrindra eto amin'ny Canal de Madagascar izay ho atsangana. Hisy ihany koa pepiline izay ampifandray ny avy any atsimo hiakatra ao Analalava Antsohihy ary hiazo an'Antsiranana sy Antananarivo.
Ny Canal de Pangalane izany dia lakandrano lehibe hivezivezen'ny rano fisotro sy famokarana agro alimentaire, sy industrie alimentaire, miaraka amin'ny autoroute sy lalamby mampitohy an'Antsiranana amin'ny Androy manaraka ny sisiny atsinanana.
Ary ny sisiny andrefan'ny Madagasikara kosa dia hisy autoroute, sy pipeline hitondra ny fitrandrahana pétrole sy gaz ary mine.
Ny faritra atsinana dia amokatra ny sakafo, ary ny faritra andrefana dia industrie extractive, na fitrandrahana, industrie lourde, métallurgie, charbon de terre, cimenterie, mine, pêche.
Azo amokarana herin'aratra izany ireo solika ireo, azo amokarana ciment, famokarana vy, sy ampandehanana ireo indostria vaventy, anamboarana goudron fanaovan-dalana, anamboarana plastique toy ireny bac à ordure ireny...
1- Fanajana ny tontolo iainana
Tandrovana hatrany ny tontolo iainana tsy hanimba ny faridranomasina, ny zava-boahary sy ny zava-maniry ary ny biby ambonin'ny tany sy ny rano ambanin'ny tany. Amaivanina kosa anefa ny resaka permis mba anamora ny fitrandahana madinika sy vaventy.
Izay tompon'ny tany no tompon'ny harena ambanin'ny tany. Afaka mitrandradraka avokoa ireo tompon-tany na izay mifanaraka aminy.
Tsy amidy amin'ny vahiny ny tany, fa mifanaraka amin'ny tompon-tany ireo vahiny.
2- Hetra sy haba
Tsy misy TVA ny asa fitrandrahana rehetra, toy ny asa famokarana rehetra eto amintsika, dia ny vokatra farany hamidy amin'ny mpanjifa ihany no akana 10% ny haba.
Ny fitaovam-pamokarana sy ny akora rehetra entina mamokatra dia tsy misy haba avokoa.
3- Ho an'ireo mpitrandraka vaventy vahiny
Ny akora notrandrahana, pétrole, Gaz, vato, mine... dia tombanana amin'ny vidiny iraisam-pirenena, ka 40% no amarotana azy fa tsy 1% toy ny hita amin'izao. tsy misy haba hafa intsony alaina.
4- Tetibola sy famatsiam-bola
20 milliards de dollars ny tetibola hitrandrahana ireo solika sy gaz ary mine ireo.
- Foibe 40%
- Faritra 10%
- Mpandraharaha Malagasy sy Ny Malagasy rehetra te hampiasa vola: 20%
- Orin'asa vahiny 30%
Ny tombony azo avy amin'ny fitrandrahana solika dia anamboarana ny autoroute manodidina an'i Madagasikara, averina amin'ny Malagasy rehetra, hamatsiana ny fandriampahalemana, hividianana avion de chasse sy sambo lehibe hiarovana ny sisintany sy ny habakabaka ary ireo harena maro ananantsika, hamatsiana ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fambolena sy fiompiana vaventy, fanamboarana trano sy nouvelle ville.
Ahena ny vidin'ny solika eny amin'ny station. Avaozina ireo fiara mpitatitra rehetra. Ampian'ny Foibe izany fanavaozana ny fiara izany.
Raha tombanana ho 30% fotsiny aza ny vidin'ireo pétrole ananantsika ireo dia azo everina fa manana 30 000 milliards de dollars isika ao anatin'ny 50 taona hitrandrahana azy.
Hisy sekoly ambony atokana amin'ny fianarana momba ny pétrole isaky ny Université 3 lehibe apetraka amin'ny Faritra 3 (Avaratra, Afovoany, Atsimo).
Antsoina avokoa ireo manam-pahaizana Malagasy rehetra na ny monina eto Madagasikara na ireo mipetraka any ivelany, ka manana traik'efa amin'izany fitrandrahana solika sy harena ambanin'ny tany izany.
(Sary Fitrandrahana solika ao Tsimiroro, andrefan'ny Madagasikara)